Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 05/12/2020)
Mitady hahita trano faran'izay amin'ny vakansy manaraka? Raha izany, tsy mety misy toerana tsara kokoa noho ny Eoropa ho anao. Na ianao liana amin'ny fomba maritrano kilasika, na manantena mahita ny sasany kely-fantatra firavaka, Eoropa tanàna no nanarona. Ndeha isika hijery ohatra vitsivitsy ny mahafinaritra maritrano ary aiza ny hahita izany rehetra:
Italia Feno ny tanàna sy ny zana-bohiny izay afaka mitandrina tsara tarehy very trano. Na ianao ao Roma na Florence, zoro rehetra dia mendrika ny sary. Ho an'ny mpizaha tany mitady tanàna kely tsara tarehy, Vicenza no tsara toerana halehany. Izany dia midika hoe akaiky ny raha ianao naka ny lamasinina na avy any Venice, izay mendrika ihany koa ny fitsidihana. Raha Vincenza dia malaza noho ny Renaissance maritrano fomba torontoronina tao an-tsaina ny Andrea Palladio, Venetian trano dia matetika Gothic, hamelabelatra, ary tsara tarehy.